mashiinka wareejinta kuleylka oo si otomaatig ah leh foornada dhalada khamriga dhalada ah,dhalada khamriga cas,Shiinaha-sxaequipment-Chinese,China,Manufacturer,Supplier,Factory,Price
Somali mashiinka wareejinta kuleylka oo si otomaatig ah leh foornada dhalada khamriga dhalada ah,dhalada khamriga cas,Shiinaha
Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay cylindrical, oval, wareega, muraayadaha dusha sare leh iyo dhalooyinka balaastigga ah oo leh tikniyoolajiyadda gudbinta kuleylka.
1. Wareeg 360 ° ah oo loogu talagalay dhalooyinka wareega iyo 180 ° laba dhinac oo kuleyl ah oo lagu wareejiyo dhalooyinka oval iyo square.
2. isticmaalka HMI waa ka caqli iyo wax soo saar badan.
Kahor wareejinta kuleylka, waxay ubaahantahay in dhalada lagu kululeeyo heerkulka 48 darajo iyadoo la kululeynayo foornada, foornada iwm.
Waxaan ku siin karnaa qalabka kuleylka oo aan ku biirin karnaa mashiinka kuleylka kuleylka si uu u noqdo khadka wax soo saarka si otomaatig ah.
Waxaa jiri doona kala duwanaansho heerkul ah inta udhaxeysa jiilaalka iyo xagaaga, fadlan fiiro gaar ah u yeelo hagaajinta heerkulka kululaynta.
Ku dar nidaamka meelaynta muuqaalka si aad uga fogaato khadka kala bixida dhalooyinka khamriga.
Flat si toos ah loo tuuro Flat iyo N95 Mashiinka Maskaha Caafimaadka
Daabacaadda shaashadda shaashadda si buuxda otomaatig ah iyo qalabka kuleylka kulul
Wareejinta Kuleylka Oomaatiga ah iyo Mashiinka Daabacaadda
Khadka Golaha ee otomaatiga ah oo buuxa
Farsamaynta Cilad Si buuxda oo otomaatig ah
si wanaagsan loo dayactiray, mashiinka loo habeeyay wuxuu leeyahay nolol ka badan 10 sano.
qaybaha ugu muhiimsan waa calaamado caan ah oo caalami ah, fikradeena hawlgalka mashiinka waxaa damaanad qaadaya tiknoolajiyada patent.
Muddada dammaanadda waa hal sano (daboola dhammaan qaybaha waaweyn, qalabka mashiinka marka laga reebo qaybaha nugul sida gacmaha farsamada);
adeeg farsamo intaad nooshahay.